12/22/12 ~ Myanmar Forward
မလေးရှား လဝကစခန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ သားတွေ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရ
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ Johor ဂျိုဟိုးပြည်နယ်၊ ပါကန်းနာနတ်စ်မြို့က လဝကထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေဟာ စခန်းတာဝန်ကျ အရာရှိတွေရဲ့ မတရားခိုင်းစေမှုတွေ ရင်ဆိုင်နေရပြီး အကျဉ်းသားအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ သံဃာများအား လှူဒါန်းဆက်ကပ်ပွဲ ကျင်းပမည်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာခရိုင် လက်ပံတောင်းတောင်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ သံဃာများအား ဘိုကလေးမြို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့မှ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ကုသနေသည့် ဆရာတော် ၄ ပါး နှင့် တရားစွဲ ဆိုခံထားရသည့် နော်အုံးလှ အပါအ၀င် (၈) ဦးတို့အား ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါပွဲကို ၂၄.၁၂.၂၀၁၂ ခုနှစ် နံနက် ၉ နာရီ အချိန် ဦးဘဟန် မှတ်တိုင် သမိုင်းဘူ တာ အနီး သမိုင်းမြို့မ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။အဆိုပါပွဲသို့ လက်ပံတောင်းတွင် တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသော ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအပေါင်း နှင့် သတင်း မီဒီယာများ ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်များ ၊ စာပေချစ်မြတ်နိုးသူများ တက်ရောက်မည့်ဖြစ်ကြောင်း ဘိုကလေးမြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဦးအောင်မြင့် မှ ဆိုပါသည်။
အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်ကယ်ရီကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရွေး
John Kerry nomination Sound
အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက်ခ်အိုဘားမားက အထက်လွှတ်တော်အမတ် John Kerry ကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးရာထူးကို ဆက်ခံဖို့အတွက် အမည်စာရင်းတင်သွင်း အဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။ John Kerry ဟာ ရှေ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်း အမေရိကန်သံတမန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် ပြီးပြည့်စုံ တဲ့ရွေး ချယ်မှု ဖြစ်တယ်လို့ သမ္မတအိုဘားမားက အိမ်ဖြူတော်မှာ သောကြာနေ့က ချီးကျူးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်း သူ့လုပ်ခဲ့တာတွေကြောင့် John Kerry ဟာ အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ ကမ္ဘာတ ၀ှမ်းကခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို ခံရသူ၊ အများက လေးစားခြင်း ခံရသူဖြစ်တယ်လို့ သမ္မတအိုဘားမားက ပြောပါတယ်။ရှေ့လာမယ့်နှစ်တွေမှာ စိန်ခေါ်မှုတွေ အများကြီး ရင်ဆိုင် ရမှာဖြစ်ကြောင်း ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့ ဆက်ပြီးတော့ ဦးဆောင်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း သမ္မတအိုဘားမားက ပြောပါတယ်။
မင်းကိုနိုင်သည်ကဗျာကို ချစ်မြတ်နိုး သူဖြစ်သည်။ မင်းကိုနိုင်သည်ပန်းချီသမား လည်းဖြစ်သည်။ သူသည် အနုပညာ သမားဖြစ်သည်။ သူသည် သံချပ်ကို မြတ်နိုးသူ၊ ကျွမ်းကျင်စွာတတ်မြောက်သူ လည်းဖြစ်သည်။ သူ၏မိသားစုသည်လည်း အနုပညာမိသားစုဖြစ်သည်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်လတ် က ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ကို နိုင်ငံသား အသိအ မှတ်ပြုကဒ်ပြား လျှောက် ထားရေးအတွက် နောက်ထပ်သက်တမ်း ၃ လ တိုးပေးဖို့ သဘောတူခဲ့ကြောင်း သိရပါ တယ်။
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ၊ ABSDF အင်အားစုတွေ၊ လူ့ဘောင်သစ် အင်အားစုတွေ အပါအဝင် ၈၈ အရေးတော်ပုံကာလမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှား ခဲ့တဲ့ ၈လေးလုံးအင်အားစုတွေစုစည်းပြီး ၂ဝ၁၃ ခုနစ် ဇွန်လ နောက်ဆုံး ထားကာ ညီလာခံတရပ်ကျင်းပ သွားမယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ဒီကနေ့ ပြောကြား လိုက်ပါ တယ်။
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ကေအဲန်ယူရဲ့  (၁၅)ကြိမ်မြောက် ညီလာခံကနေ ဥက္ကဌ၊ အထွေထွေ အတွင်းရေး မှူး စတဲ့ ထိပ်ပိုင်း (၅)နေရာကို လူသစ်တွေနဲ့ သောကြာနေ့က အစားထိုးရွေး ချယ် တင်မြောက်ခဲ့ တယ်လို့ စုံစမ်းသိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံတကာမှ လာရောက်လုပ်ကိုင်သည့် စီမံကိန်းအားလုံးတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဘ၀ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု ဆန်းစစ်ချက် (EIA,SIA) ပါဝင်မှုနည်းပါးနေသဖြင့် ပြန်လည်လေ့လာနိုင်ရန် JICA မှ ODA ပေးမည်ဟုသိရ
﻿မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းများအားလုံးတွင် သဘာဝ ပတ်ဝန်း ကျင်နှင့် လူမှုဘ၀ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ချက် (EIA,SIA) များ ပြုလုပ်ရန်အတွက် JICA မှ ODA ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောပညာရှင် ဦးအုန်းက ဒီဇင် ဘာလ ၂၁ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဗြိတိန်အစိုးရက ကချင်ပြည်နယ်အတွက် အကူအညီထပ်မံပေးအပ်မည်
ဗြိတိန်အစိုးရက ကချင်ပြည်နယ်အတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူ အညီတွေ ထပ် မံပေး အပ်သွား မည်ဟု ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွင်းဝန် မစ္စစ်ဂျက်စတင်ဂရင်းနင်းက ပြောကြားကြောင်း နိုင်ငံတ ကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနက ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ၈ရက်
(၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ရက်)
၁။ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ အမိန့် ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၉၅/၂၀၁၂)ဖြင့် ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ဥက္ကဌအပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် ၁၆ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေး အပ်ခဲ့သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တို့သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ မှ ၁၅ ရက်နေ့ အထိ ကြေးနီစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်း လေ့လာမှုတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အင်အားကြီး ၆ နိုင်ငံ နျူကလီးယား ကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အီရန်နိုင်ငံနှင့် စေ့စပ် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်မည်
အငြင်းပွားဖွယ် နျူကလီးယား အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး နိုင်ငံများနှင့် ကာလကြာရှည် လိပ်ခဲတည်းလည်း အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်နေမှုအား အဆုံးသတ်ရန် အချိန်ကျရောက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အီရန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး အလီအက်စ် ဘာဆာ လက်ဟီက ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
မြစ်ကြီးနား၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁
ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ၏ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် မိုင်းခွဲ ဖျက်ဆီး ခံခဲ့ရသော မြစ်ကြီးနား-ထိန်ချုံး လမ်းပေါ်ရှိ လန်နု တံတားကို ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ပြန်လည် တည်ဆောက်လျက် ရှိကြောင်း ယင်းတံတား ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း ထံမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
အိမ်နီးချင်း လင်မယားနှစ်ဦးအတူနေပုံကို ဗီဒီယို ခိုးရိုက်ခဲ့လို့ ဓားထိုးခံရ
Posted by drmyochit Saturday, December 22, 2012, under မှုခင်း | No comments
သူတစ်ပါးလိင်ကိစ္စအား ချောင်းမြောင်း ကြည့်ရှု တတ်သူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏ အိမ်နီးချင်း လင်မယား လိင်ဆက် ဆံနေကြပုံကို ချောင်း မြောင်းကာ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးခဲ့ရာ အဆိုပါ အိမ်နီး ချင်းမှ ဒေါသထွက်ကာ ဓားဖြင့် ထိုးသတ်ခဲ့ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
သစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းခုတ် ဒဏ်ငွေ (၁၃)သိန်း တောင်းလိုက်တဲ့ မြေပုံကျေးရွာက အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ´´
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ပြင်စာကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံကျေးရွာမှ ဦးအောင်လွင်သည် အိမ်ဆောက်ရန် မိမိခြံဝင်း အ တွင်း သို့ ကိုင်းညွတ်ကျနေသာ မလွတ်ကင်းသည့် ညောင်ပင်ကိုင်းကို ခုတ်ရန်အတွက် သစ်တော ဦးစီး ဋ္ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူထံသို့ သွားရောက်အသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်း၊ သစ်တော ဦးစီးဋ္ဌာနမှ (၇-၁၂- ၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းကြည့်ပြီး နုတ်ဖြင့်ခုတ်ခွင့်ပေးကြောင်း သို့သော်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား အသိပေးရန်လိုကြောင်း ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မြိတ်-ကံမော်ကျွန်းစု ခရီးစဉ်စတင်
မြိတ်-ကံမော်ခရီးစဉ် သွားရောက်မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် တွေ့ရစဉ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မြိတ်-ကံမော်ကျွန်းစုခရီးစဉ် များအတွက် ရန်ကုန်မြို့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် လေယာဉ်ဖြင့် စတင်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ခင်ပွန်း ဖြစ်သူနှင့် စကားများပြီး ကြိုးဆွဲချ သေဆုံး
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူခရိုင် ကျောက်ကြီးမြို့နယ် ကျောက်ကြီး ရဲစခန်း အပိုင် တုံးကြီးကျေးရွာ အုပ်စု ရှမ်းချောင်း ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦး ကြိုးဆွဲချ သေဆုံး မှု ဖြစ်ပွားသည်။
“ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာ ရှိုးဂန်း(ခ)စံလင်းအောင်အား ပြန်မိပြီ”
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်တရားရုံးခန်းမှ ထွက်ပြေးသွားသူ ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာရှိုးဂန်း (ခ) စံလင်းအောင်အား ပြန်လည်ဖမ်းမိလာပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒုစရိုက်နှိမ်နှင်းရေးဌာနမှ ပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယနေ့လေကြောင်း ခရီးစဉ်ဖြင့် လားရှိုးမှ ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည်ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်လာနေပြီဟု သိရသည်။
ကမ္ဘာ. ဆိုးရွားး ယုတ်မာ ၇က်စက်ဆုံး မုဒိမ်းမူနှင်.လူကုန်ကူးမူ. ဒါဏ်ကို မြန်မာနှင်. မွန်မလေးများ ခံစားနေရ။
messenger မှ ဆိုသည့် ဒီမိုကရေစီ အကျိုးပြု DKBA အခမ်းအနားမှ အမှတ်ရစရာများ
Posted by drmyochit Saturday, December 22, 2012, under ဓါတ်ပုံသတင်း | No comments
ဒီမိုကရေစီ အကျိုးပြုလား မပြုလားတော့ မသိ။ စစ်ဗိုလ်ပြုတ် နှစ်ကောင် အဲဒီရောက်နေတာတွေ့သည်နှင့် တင်ချင်စိတ်ကို မရှိတော့။ ငြိမ်းချမ်းရေး ပန်းများ ဝေဆာစေခဲ့တဲ့ ကရင်ပြည်နယ်မှ စစ်သမီးပျိုလေးများသာ အမှတ်ရလိုက်သည်။ သူမတို့ ယခုလို လှပတက်ကြွနေချိန်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးမှ ကရင်ပြည်နယ်အေးချမ်းဖို့ အသက်စွန့်၊ ကိုယ်လက် ပေးဆပ်ခဲ့သူများ၏ သားသမီးများကတော့ သူမတို့လို ပျော်ရွှင်နိုင်ပါ့မလားဆိုသည့် အတွေးများ၊ ထို စစ်သားအိုများ၏ အနာဂတ်တွင် သူရဲကောင်းများဟု အသိအမှတ်ပြုပေးမည့် နိုင်ငံ ခေါင်း ဆောင်ကောင်းများ ဘယ်တော့ ပေါ်လာမှာပါလဲ ဆိုသည့် အတွေးများ၊ မဖော်ပြနိုင်လောက်သည့် အတွေးများနဲ့ ယောက်ယက်ခတ်ရင်း
အမေရိကန်နိုင်ငံမှဥပဒေပညာရှင်တဦးက ဒီဇင်ဘာလ အစောပိုင်းက လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီ စီမံ ကိန်းဒေသ သို့သွားရောက်လေ့ လာခဲ့ပြီး ဒေသခံကိုယ်စား တရားစွဲဆိုမည့် ရှေ့နေ ၁၀ဦးနှင့်လည်း ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း ခဲ့သည် ။်ဖြစ်စဉ်မှာလက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းအရေးနှင့်ပတ်သက်ရု မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေ များကွန် ယက်က ဒေသခံပြည်သူများကိုယ်စား ၂၀၁၃ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တရားရုံး ချူပ်အမှုဖွင့် ရန်စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အမေရီကန်နိုင်ငံမှ အခမဲ့အမှုလိုက်ပေးမည့် ဥပဒေ ပညာရှင် သည် မစ္စတာ ရော်ဂျာနော်မန် ဆိုသူဖြစ်ပြီး ၄င်းက အခမဲ့ အမှုလိုက်ပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းရှိ သပိတ်စခန်းများ
ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဥပဒေပုဒ်မ (၁၈) သည် နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးများကို များစွာ ချိုးဖောက်နေကြောင်း ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ထုတ်ပြန်
ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဥပဒေပုဒ်မ (၁၈) သည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသား အခွင့် အရေးများကို ပြန်လည်ချိုးဖောက်နေသည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား များသမဂ္ဂ (ဗကသ) အဖွဲ့ချုပ်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု၊ လူနေမှုဘ၀ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ အကဲဖြတ်ရန်နှင့် မြေယာသိမ်းဆည်းမှုတွင် ပေးအပ်ခဲ့သော လျော်ကြေးများနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်က ဆက်လက်လေ့လာစုံစမ်းမှု ပြုလုပ်သွားမည်
နိုင်ငံတော် သမ္မရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉၅/၂၀၁၂ ဖြင့် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ဥက္ကဋ္ဌ အပါ အ၀င် အဖွဲ့ဝင် ၁၆ ဦး ဖွဲ့စည်း ပါဝင်သည့် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း စုံစစ်ဆေးရေး ကော် မရှင် ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု များကို နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာများမှ တစ်ဆင့် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီ သတင်းတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု၊ လူနေမှု ဘ၀ အကျိုးသက်ရောက် မှုများ အကဲဖြတ်ရန်နှင့် စီမံကိန်းအတွက် မြေယာ သိမ်းဆည်းမှုများတွင် ပေးအပ် ခဲ့သော လျော်ကြေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်လက်လေ့လာ စုံစမ်းမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဟု သတင်း ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။